A Contribution to Nepali literature by DE: 2010
खान्न खान्न भन्दै थिएँ,
कसो कसो खाइहालीयो,
पोल्दै पोल्दै भित्र गयो,
खुट्टा लुलो हुन थाल्यो,
आँखा धमिलो हुँदै गयो,
टाउको रन्थनिदै गयो,
खान्न त भन्दै थिएँ नि,
तर रिसले खुवाएरै गयो,
त्यसपछी त मजै अर्कै भयो,
१०० लाई २०० देख्न थालियो,
मस्त रक्सी खाएर,
नसाले मस्त मातेर,
आफु जाने बाटो नै बिर्सेंर,
बालाजु पुग्नु पर्ने मान्छे,
गोङ्गबु को गाडी चडेर,
घर फर्कदा पुलिससँग बचेर,
जस्तो तसो घर त पुगियो,
लौ अब परेन फसाद,
आमा भन्नु हुन्छ,
छोरा खाना खान आइजा न,
बुवा भन्नु हुन्छ,
छोरा मेरो यति Type गर्दे न,
दिदी भन्नु हुन्छ,
भाई मेरो Laptop बनाइदे न,
मेरो Mobile मा पैसा पठाइदे न,
म रक्सी र रिसमा डुबेर,
चुर चुर भएको,
जुत्ता पनि नखोली,
खाटमा बसेर यो,लेख्दै छु।
Posted by DE at 8:52 AM0comments
Posted by DE at 7:54 AM 1 comments
म पनि हाँस्छु, म पनि खेल्छु भन्दा भन्दै,
मेरो मनमा रिस र क्रोधको ज्वालाको बिस्पोठन भयो,
म पनि चाहन्थें, मेरा साथी हरु सँग हाँस्न र खेल्न,
अनि रमाइलो गर्न,
तर मेरा यि आशाहरु,
आशा मात्रै बन्ने भए,
मेरा मनका भावनाहरु,
मन भित्रै गुम्सिने भए,
कतै पोख्न पाइन मैले,
मेरा कुरा बुझ्ने मान्छे,
कतै भेट्न पाइन मैले,
मेरा कुरा सुन्ने मान्छे।
पिडा नै पिडाले पिल्सिएर,
दु:खको यो घनघोर सागरमा,
म आज केही बन्न खोजिरहेछु,
आफुले गरेका अनगिन्ती गल्तीहरु,
लुकाएर सम्मान खोजिरहेछु,
आफ्नो मन भित्रको आँधी,
म लुकाउन शान्ति खोजिरहेछु,
आज भोली यसो सोच्छु,
यि सबै मैले किन गरेँ भनेर
तर यि सबै गर्नुका पछाडि
कुनै मेरो बाध्यता पनि थियो,
म बाध्यतालाई दोश दिएर
आफु ले गरेको गल्ती
अरु माथि थुपार्न चाहन्न,
जे होला जस्तो होला,
म त्यस्को परीणाम भोग्न तयार छु,
अझै म यो नर्कमा बस्न सक्दिन,
त्यसैले त, मैले Surrender गर्ने निधो गरेँ।।।।।।।।।।।।।।।
Posted by DE at 7:22 AM0comments
Posted by DE at 8:06 AM3comments
महीला सिट मा बस्ने पुरुष भलाद्मीहरु
आज घर फर्किन अलि ढिलो भएको थियो, अनि साँझको समय भएकोले गर्दा अनि office छुट्ने समय भएको हुनाले गाडी अलि-अलि प्याक नै थियो। म चाहीँ Ipod मा गेम खेल्दै थिएँ, यस्तै मा एउटी महिला वच्चा बोकेर गाडी मा चढीन् । विचारा उनलाई निकै गाह्रो भई रहेको जस्तो लाग्थ्यो। म चाहीँ अलि पछाडि बसेको भएर मैले उनीलाई म बसेको Seat छोडिदिने विचार गरिन। लाग्यो, उन्कै नजिक बसिरहेका मान्छेहरुले उन्लाई सिट छोडिदिन्छन् भनेर। गाडी जमल बाट नि हिंड्न थाल्यो! तर खै त उनीलाई सिट छोड्दीने मान्छे त कोही पनि देखिन्नन् त! उनीलाई नि साह्रै रिस उठ्यो कि के भो, अगिल्लो सिटमा बसेको मान्छेलाई सोधिन्, दाई तपाईं के गर्दै हुनुहुन्छ?, त्यो मान्छे ले मुस्कुराउँदै, उत्तर दियो, म शंकरदेव मा MBS गर्दै छु। अनि महिला ले फेरी भनिन् "भने पछी तपाईं विधार्थी!"। त्यो मान्छे नि मख्ख पर्दै हो भन्यो, म अचम्म मा परेँ, उनी के कुरा गरी रहेकी छन् भनेर। मेरो मन मा नाना थरी प्रश्न खेलेरहेको बेला मा उन्ले त्यो मान्छे लाई सोधिन्, "तपाईं लाई पढ्न आउँछ त?" त्यो मान्छे अक्क-मक्क पर्दै भन्यो, "म विधार्थी हो, के कुरा गर्नु हुन्छ?" अनि ति महिलाले मुस्कुराउँदै भनिन्, त्य्सो भए, त्यो माथि लेखेको कुरो पढ्नुस् न त। त्यो मान्छेले के लेखेको रहेछ भनेर हेर्न गर्धन माथि लाग्यो। त्यहाँ ठुलो अक्षरमा लेखेको थियो महिला सिट।
Posted by DE at 9:04 AM0comments
म कविता लेख्दै छु
धेरै पछी मलाई केही लेख्ने जोश आइरहेको छ। मलाई कविता लेख्न मन लाग्यो, लेख्दै गएँ लेख्दै गएँ पानाहरु भर्दै गएँ अनि कलम को मसी सक्दै गएँ। हृदयमा लागेजति सबै रिस पोख्दै गएँ, सोचेँ कि म कविता लेख्दै छु तर खै के भयो के भयो मलाई मैले केही विचार गर्नै सकिन। म लेख्दै छु यती कुरा मलाई थाहा छ तर के लेख्दै छु भन्ने मैले कुरो म निधो दिन सक्तिन। म कसरी यस कुरोको निधो दिउँ, यो कुरो त म आफुलाई नै स्व्यमं थाहा थिएन। मैले थाहा पाउँ नि कसरी, मेरो हालत नै त्य्स्तै थियो। रक्सी को ताल मा म मस्त भई रहेको थिए। के गर्दै छु, के सुन्दै छु, अनि के बोल्दै छु भन्ने मलाई पनि थाहा छैन।
धेरै रिस उठेको छ मलाई यो संसार सँग, त्यसैले त मैले यस संसार का बारेमा धेरै कुरा लेखेँ। यहाँ बस्ने मेरा साथी भनौंदा का बारेमा नि मैले लेखे। लेखेँ त के भन्नु, मनमा रहेका सबै रिस पोखेँ। गाली गरेँ अनि अश्लील शव्द नि प्रयोग गरेँ। लेखिँदो रहेछ रिस उठ्दा त, जे मन लाग्यो त्यही! तर मलाई साँच्चै मेरो छेउमा बस्ने अनि मेरो अगाडि राम्रा कुरा गर्दै मेरो पछाडि पछाडि मलाई नै खुकुरी हन्ने मेरा मित्र तथा साथी भनौदाहरु सँग धेरै कुरा भन्न मन छ। धेरै रिस पोख्न मन छ यो देशका नेताहरु सँग। कति बेला राती म निदाएछु। बिहान Alarm बज्यो अनि उठेँ। यसो यता उता हेरें, कलम भाँचिएर तन्ना भरि मसी लागेको रहेछ। अनि छेउमा रहेको कापीमा केही लेखिएको थियो। कापी उठाएँ अनि पढेँ। लेखिएको थियो कविता पढ्दै गएँ, पढि सके पछी त लाज लाग्यो, मैले यसको बारेमा यस्तो लेखे छु भनेर। कच्याक-कुचुक पारेर Dustbin मा फालें। अनि लुगा लगाएर कलेज तिर लागें। अनि कलेजमा तिनै साथीहरुसँग हात मिलाएँ। एक छिन त हाँसो उठ्यो, अनि लागेँ सँगै बेन्चमा बसेर Signal Analysis को Class लिन।
Posted by DE at 7:48 AM 1 comments